Magnetic Stripe Card IC Card PSAM Card M1 Card4တွင် 1 စာဖတ်သူကို, Magnetic Stripe Card IC Card PSAM Card M1 Card Multi-function card Reader, Magnetic Stripe Card IC Card CPU Card M1 Card4တွင် 1 စာဖတ်သူကို
သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို, IC Card ကို, PSAM Card ကို, M1 Card ကို4တွင် 1 စာဖတ်သူကို
သံလိုက် Stripe ဟာကတ်စက်ပစ္စည်း Magnetic Stripe Card IC Card CPU Card M1 Card4တွင် 1 စာဖတ်သူကို, Magnetic Stripe Card IC Card PSAM Card M1 Card4တွင် 1 စာဖတ်သူကို, Magnetic Stripe Card IC Card PSAM Card M1 Card Multi-function Reader
သံလိုက် Stripe ဟာကတ် Reader ကို, Contact IC Card Reader, CPU Card Reader, PSAM Card Reader, Mifare IC Card Reader perfect combination.
ဒေတာကိုဆက်သွယ်ရေး: USB ကြိုး
အရွယ်: L ကို 160mm X ကို W က 45mm x ကို H ကို 45mm
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20 ℃ ~ + 55 ℃
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -30 ℃ ~ + 70 ℃
Card ကိုစံ compatibility: က ISO 7811, AMMVA,CADMV
စမတ်ကဒ် interface ကို: ISO14443-တစ်ဦးက, NXP Mifare
RFID ကဒ် compatibility: ISO ကို 14443A, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, ultra အလင်း, Mifare Desfire, Mifare Plus အား
Card ကို compatibility: AT24C01A, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C64, AT24C128, SLE4432, SLE4442, SLE4418, SLE4428, ISO7816-(1-4) (T က = 1, T က = 0)
Card အားအဆက်အသွယ်အစက်အပြောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်: အကွောငျး 200000 ကြိမ်
PC ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး: ယူအက်စ်ဘီ
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: ထောက်ခံမှု T က = 0, T က = 1 CPU ကိုကဒ်, ဆက်သွယ်ရေးမြန်နှုန်း 9600 bps
စံကိုလိုက်နာပါ: ISO ကို 7816-3
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows 7, ဝင်းဒိုး 8, Windows2008, WindowsVista, Windows2003, Windows2000, WindowsXP, Linux ကို
C-MR-160A Magnetic Stripe Card, IC Card ကို, CPU ကိုကတ်, PSAM Card ကို, M1 Card ကို4တွင် 1 စာဖတ်သူကို, က Multi-function ကိုကဒ်စာဖတ်သူကိုဖြစ်ပါသည်,acollection of magnetic stripe card reader and radio frequency card/IC card read/write function. Can help you to read magnetic stripe card and read/write RFID card and IC card. USB က interface ကို PC မှာစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူကွန်နက်ရှင်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်. Magnetic card support two-way swipe card, ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ, can be read magnetic card 1, 2,3လမ်းကြောင်းသတင်းအချက်အလက်.
C-MR-160A widely used in the attendance, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, လမ်းနှင့်တံတားသေဆုံးသူ, ဓာတ်ငွေ့ / ရေနံဘူတာ, ကားတစ်စီးဥယျာဉ်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အဖိုးအခများဆေးပညာဆိုင်ရာအပေါင်းတို့နှင့်မျိုး, သိမ်းဆည်းထားတန်ဖိုးကို, ထိုကဲ့သို့သောစမတ်ကဒ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအဖြစ်မေးမြန်းမှု applications များ, အလွယ်တကူသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အပလီကေးရှင်းဖို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်.
Read all 1,2,3 track magnetic stripe card, ထောက်ခံမှု Two-လမ်းပွတ်ဆွဲကဒ်
I am interested in your product Magnetic Stripe Card, IC Card ကို, PSAM Card ကို, M1 Card ကို4တွင် 1 စာဖတ်သူကို
prev: ဘဏ် ATM စက်များ Access ကိုသံလိုက်ကဒ် Reader ကို, ဘဏ် ATM စက်များသံလိုက် Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
နောက်တစ်ခု: သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, multi-function ကိုကတ် Reader ကို